Nilaza i JJ Abrams fa tsara vintana izy miasa amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Androany dia miofana amin'ny Apple TV + andiany izy Tantaran'i Lisey, andiany misy fizarana 8 mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Stephen King ary izany dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana talen'ny JJ Abrams. Nifanindry tamin'ilay première an'ity tetikasa vaovao ity, dia nanao dinidinika ho an'i Decider i Abrams.
Amin'ity fanadihadiana ity dia nilaza i Abrams fa tetikasa hafa mihitsy ity andiany ity tamin'ny fiaraha-miasa teo aloha niaraka tamin'i Stephen King. Raha ny filazany dia nifandray tamin'ny orinasany mpamokatra i King mba hanontany raha liana amin'ny hitondra ilay tantara tiany indrindra amin'ny efijery kely izy ireo.
Nilaza i Abrams fa nafana fo tamin'io hevitra io izy, tsy hoe satria boky mahafinaritra io, fa satria fantany koa ny dikan'ny hoe hitondra ny boky tiany amin'ny efijery kely i King. Raha ny marina dia i Ling no niandraikitra ny fampifanarahana ny endrika amin'ny endrika serial.
JJ Abrams dia nilaza fa:
Rehefa mamaky tantara dia mahita zavatra hafa kely ny tsirairay. Na dia tsara tarehy toy izao aza ny boky ary voafaritra tsara toa an'izao tontolo izao, dia hisy tantara iray ho eo an-dohanao amin'ny fomba sasany. Na noho ny toerana misy azy, noho ny fifandraisana ary noho ny olona mihitsy. Ahoana no fomba hamelomanao ny toetra toa an'i Lisey? Sarotra kokoa noho ny toa izy io?
Ny talen'ny horonantsary koa afaka fotoana miresaka momba ny fifandraisany amin'ny Apple TV +. Tsarovy izany Niasa tao amin'ny Apple TV + i Abrams teo aloha ao amin'ny famokarana Little Voice ary manome sosokevitra fa misy tetikasa hafa eo an-dàlam-pandrosoana.
Holazaiko fa tena mpankafy ny Apple TV + ry zareo ary tiako ny traikefa hatreto. Azo antoka fa mpiara-miasa mahatalanjona izy ireo tamin'ny "Tantaran'i Lisey." Heveriko fa, amin'ny farany, amin'ny orinasa lehibe, amin'ny rojo lehibe, ny olona izay eo, no manana ny tanana ambony, ary miaraka amin'iza no ahatsapanao fa mifanaraka na tsy ekenao. Mahatsiaro ho sambatra tokoa aho miara-miasa amin'ireo olona ao amin'ny Apple satria heveriko fa toa mahita zavatra manaitaitra antsika rehetra miaraka amin'ny fomba iray isika. Ka noho izany dia tsy faly mihoatra ny faly miasa miaraka amin'i Apple aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Nilaza i JJ Abrams fa mahatsapa vintana izy afaka miasa amin'ny Apple TV +
27 "Fanehoana Thunderbolt dia nampiana lisitra 'vintage'